Ogaden News Agency (ONA) – Wasiirada Arimaha Dibada ee Dalalka Afrika oo Kushirsan Kigali Rwanda.
Caasimada Kigali ee wadanka Rwanda waxaa kasocda shir ay leeyihiin wasiirada arimaha dibada ee dalalka qaarada Afrika. Shirkaas ayaa waxaa looga gol leeyahay inuu noqdo mid gogol xaadh u ah kulan ay yeelan doonaan madaxda qaaradan Afrika dabayaaqada todobaadkan aan kujirro.
Arimaha lagu qaadaa dhigi doono ayaa waxaa kujira yeelashada hal baasaboor iyo lacagaha ku baxa midowga Afrika. Qarashka ayaa haatan midowga Afrika waa ururka Midowga Afrikee waxaa bixiya Midowga Yurub.
Haatan waxaa ay ka wada hadlayaan wasiirada arimaha dibadu sidii ay qarash qaaradu soo saarto loogu bixin lahaa ururka Midowga Afrika baddalkii Midowga Yurub mar walba wax laga sugi lahaa. Wasiirada Arimaha Dibada ee dalalka Afrika ayaa maanta ay u ahayd maalintii shanaad ee ay Kigali kushirsan yihiin.
Shirkaan ayaa ah kii 27-aad ee noociisa ah. Qeybtii 1aad ee shirkaa ayaa waxaa lagu furay safiirada Midowga Afrika wadahadalo ay halkaa kulahaayeen. Sidoo kale ayaa waxaa shirka hadheynaya dagaalka mar kale ka qarxay Koofurta Suudaan.